wanted - Synonyms of wanted | Antonyms of wanted | Definition of wanted | Example of wanted | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for wanted
Top 30 analogous words or synonyms for wanted
ဟယ်လင် သောမတ်စ် သူမဘဝတစ်လျှောက် စာအုပ် ၆ အုပ်ရေးသားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစာအုပ် "Listen Up, Mr. President: Everything You Always Wanted Your President to Know and Do " ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကရစ် ကရောဖို့ဒ်နှင့်တွဲပြီး ရေးသားခဲ့သည်။
Outlaw country လည်း သူသည် outlaw ရွေ့လျားမှုနှင့်အတူ သူ၏ဘဝရှင်သန်ခြင်းမှ အတွေ့အကြုံများရရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် At Folsom Prison နှင့် At Sun Quentin album များကို ထောင်ထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Cash သည် Nelson, Jennings နှင့် Kris Krisfofferson နှင့်အတူ အဆက်အသွယ်များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ကွဲပြားသော folk counterculture figures နှင့်အတူ စကားအသုံးအနှုန်းကို ကောင်းမွန်စေခဲ့သည်။ အချက်အလက်များသည် Nashvilleနှင့် television အခွင့်အာဏာများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ တွင် Outlaw ရွေ့လျားမှုသည် Wanted! The Outlaws ၏ဖြန့်ချီမှုနှင့်အတူ မိုင်တိုင်အသစ်တစ်ခုအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ Waylon Jennings, Willie Nelson, Jessi Colter, နှင့် Tompall Glaser တို့ featuring သီဆိုထားသည်။ Wanted! The Outlaws သည် ပထမဆုံး country album ဖြစ်လာပြီး platinum ရွှေတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည်။
Country pop ကြသည်။ လတ်တလော pop နှင့် country စာရင်းများတွင် Lady Antebellum ၏ Just A Kiss, The Band Perry ၏ If I Die Young, Kelly Clarkson ၏ Mr.know it All, Hunter Hayes ၏ Wanted နှင့် Florida Georgia Line၏ Crusie တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။
‌ခြောက်လှန့်မျက်နှာဖုံး "ခြောက်လှန့်မျက်နှာ‌ဖုံး"ကို USA Today နှင့် Publishers Weekly ၏ အရောင်းရဆုံး စာရင်းတွင် ထည့်ဖော်ပြရပြီး၊ စာဖတ်ရန် အင်တင်တင် ဖြစ်နေသူများနှင့် ဟောလိုးဝင်း ဇာတ်လမ်းကို ညလုံးပေါက် ဖတ်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးဟု ညွှန်းကြသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်လယ်တွင်(in the mid-1990s)၊ စာအုပ်ကို ရုပ်သံ ပြန်လည် ရိုက်ကူးပြီး ၁၉၉၆ မတ် ၁၂ တွင် VHS ဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည်။ "ခြောက်လှန့်မျက်နှာဖုံး" သုံးတွဲ ရှိသည်၊ "ခြောက်လှန့်မျက်နှာဖုံး(၂) (The Haunted Mask 2)"၊ "ခြောက်လှန့်မျက်နှာဖုံး၏အော်သံ (The Scream of the Haunted Mask)" နှင့် သီးခြားဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည့် "အလိုရှိသည်၊ ခြောက်လှန့်မျက်နှာဖုံး (Wanted: The Haunted Mask)" တို့ ဖြစ်သည်။
ခရစ် ပရတ် ခရစ္စတိုဖာ မိုက်ကယ် "ခရစ်" ပရတ် (born June 21, 1979) သည် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် "Everwood" TV ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် "Parks and Recreation" ဇာတ်လမ်းတွဲမှ နေရာရလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထုတ် Wanted (၂၀၀၈) "Moneyball" (၂၀၁၁)၊ "The Five-Year Engagement" (၂၀၁၂)၊ "Zero Dark Thirty" (၂၀၁၂)၊ "Delivery Man" (၂၀၁၃)၊ "Her" (၂၀၁၃) ရုပ်ရှင်တို့တွင် ဇာတ်ပို့အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကွန်ပျူတာ အထူးဖန်တီးချက်များပါဝင်သော ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် "Guardians of the Galaxy" ဆူပါဟီးရိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၌ Starlord အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ရေပန်းစားသော ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း Wernher von Braun was an accomplished amateur musician who could play Beethoven and Bach from memory. Von Braun learned to play the cello and the piano at an early age and originally wanted to becomeacomposer. He took lessons from composer Paul Hindemith. The few pieces of von Braun’s youthful compositions that exist are reminiscent of Hindemith’s style.
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း "We knew that we had createdanew means of warfare, and the question as to what nation, to what victorious nation we were willing to entrust this brainchild of ours wasamoral decision more than anything else. We wanted to see the world spared another conflict such as Germany had just been through, and we felt that only by surrendering suchaweapon to people who are guided by the Bible could such an assurance to the world be best secured.”
Outlaw country မူရင်း outlaw label အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ Jason Mellard အဆိုအရ Progressive Country: How the 1970s Transoformed the Texan in Popular Culture ၏စာရေးဆရာက အမျိုးသားရေးအသိစိတ်မှ ပေါက်ကွဲခြင်းထက်အနှစ်သာရပိုသည်။ ထိုဝေါဟာရကို Ladies Love Outlaws စတင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး Lee Claytonနှင့် Waylon Jennings တို့၏ ၁၉၇၂ခုနှစ်၏ album of the same name မှသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဝေဖန်ရေးဆရာ Dave Hickey က ၁၉၇၄ country Music မဂ္ဂဇင်းတွင် Nashbille ဂီတစက်မှုမှတ်တမ်းကို ဆန့်ကျင်သော အနုပညာရှင်များကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၇၆တွင် outlaw ရွေ့လျားမှုသည် Waylon Jennings, Willie Nelson, Jessi Colter နှင့် Tompal Glaser တို့သီချင်းများပေါင်းစည်းထားသော Wanted! The Outlaws ဖြန့်ချီမှုနှင့်အတူ သိပ်သည်းခိုင်မာလာစေခဲ့သည်။ တစ်သန်းရောင်းချနိုင်မှုနှင့်အတူ platinum ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိသော ပထမဆုံး country album ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အပိုလို ၁၁ The Apollo 11 mission insignia was designed by Collins, who wantedasymbol for "peaceful lunar landing by the United States." He chose an eagle as the symbol, put an olive branch in its beak, and drewalunar background with the Earth in the distance. NASA officials said the talons of the eagle looked too "warlike" and after some discussion, the olive branch was moved to the claws. The crew decided the Roman numeral XI would not be understood in some nations and went with "Apollo 11;" they decided not to put their names on the patch, so it would "be representative of everyone who had worked towardalunar landing."